ဂျူးအမြင်	December 10, 2009
9 Responses to “ဂျူးအမြင်”
နင်.အမေလွား ပါလား……….။ ငါက ဂျူး ဆိုတဲ.စာရေးဆရာမရေးတယ်ထင်လို. ဖတ်လိုက်တာ…။
>> to မောင်လူဆိုး >
အော်… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြောင်ပြီး ယောင်ပြီး အ ပြီး ပိန်းပြီး ဒူမှန်းမသိ ဒူနေတဲ့ ကောင်က
ဘာသာရေးပိုစ့်အောက်မှာ သနားစဖွယ် လိုင်းလာကြောင်နေရသေးတယ်လို့…
ဖြစ်ရမယ် … မောင်လူဆိုးရေ …
“ယေရှုကြွလာစဉ်ဂျူးတို့က သူတို့ကို ရောမတို့၏ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခံဘဝမှ ကယ်တင်မည့်အရှင်နှင့်သူရဲကောင်းဟု ထင်ခဲ့ သော်လည်း ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်းသိမြင် လာသောအခါ”သခင်ယေ၇ှုကဘာများလုပ်မိလို့သူတို့ကအဲ့လိုထင်သွားတာလဲနော်..??
လူတိုင်းက ခရီးတစ်ခုကို နောက်ဆုံး အတူရောက် မှာ ပါ….
ဘိုးဘေးတို့ ရဲ့ ကိုးကွယ်မူကိုတော့
ထိုသူတို့ကိုအာမခံပေးမယ့်သူဟာသခင်
ဂျူးဘာသာတွင်ကလည်း ဘုရားသခင်က မထမ နေရာမှာ ဦးစားပေးပြီ အဦးဆုံး လူမျီုးခည်းဖြစ်သည်